Wistron dia manatevin-daharana ny rojom-pamokarana ho an'ny iPhone 8 | Vaovao IPhone
Toa ny iPhone 7 dia tsy mamorona fanantenana betsaka araka izay azonao an-tsaina ny vokatra Apple amin'ireo toetra ireo. Ary ny tsy fisian'ny vaovao amin'ny resaka famolavolana, ny maso rehetra dia eo amin'ny iPhone 8. Araka ny hitanao dia mandingana dingana lojika izahay raha ny momba ny laharan'ny iPhone dia miresaka momba ny "S" izay Apple dia ampiasaina amin'ny fampisehoana antsika. Izany dia noho ny filazan'ny mpandinika rehetra, ary raha omena ny lojika amin'ny faha-folo taona nanombohan'ny iPhone, dia hahita kinova manokana momba izany isika amin'ny 2017. Ny zava-baovao teknika izay hihaonantsika dia nahatonga an'i Apple nanampy orinasa mpanamboatra hafa ho an'ireo mpiara-dia aminy, Wistron.
Ity orinasa ity dia efa fantatry ny Apple, satria nanampy tamin'ny faritra faharoa amin'ny fitaovana toa ny iPhone 5s izy io ary amin'ny teny nalaina dia manondro ny meloka ny tahiry ambany amin'ny iPhone SE, hatramin'ny nanirahan'i Apple ny famokarana finday kely io. an'ny orinasa, rehefa nanome ny varotra izay mazava ho azy fa tena fohy tokoa. Nahomby ny iPhone SE, niandry fitaovana lehibe efatra metatra mahery ny besinimaro, ary dia namaly izany. Ny orinasa Wiston dia nampitombo ny drafi-pandraharahana kasaina hatao any Shina avy amin'ny 135 tapitrisa dolara ho 200 tapitrisa dolara, izay mahatonga antsika hieritreritra fa manana mpampiasa vola manan-danja ao ambadik'izany (raha ny Digitime).
Mirongatra ny orinasa, toa ny olona rehetra mifandraika amin'ny fitaovana Apple iPhone. Saingy araka ny efa nolazainay, ny fampidirana an'i Wistron amin'ny fanamboarana ny iPhone 8 dia tsy mahagaga, Apple dia efa nanisa an'ity orinasa ity mihoatra ny indray mandeha ary fantany izay asa tsara ataon'izy ireo. Araka ny efa nolazainay, tsy nahomby tamin'ny iPhone SE izy io, saingy mieritreritra izahay fa noho ny tsy fahampian'ny fahitan'ny tovolahy avy any Cupertino.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Wistron dia manatevin-daharana ny rojom-pamokarana ho an'ny iPhone 8 ho avy
Faly aho mahita ny anarako ato amin'ity boky ity… arahaba 🙂